fumana ikhibhodi ebukekayo yeapile kunye neapos; yeklasi ye-9.7-intshi ipad pro ngexabiso eliphantsi, elisezantsi le- $ 60 (entsha kraca)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Fumana ikhibhodi ebalaseleyo yeApple kunye neapos yeklasi ye-9.7-intshi ye-iPad Pro ngexabiso eliphantsi, eliphantsi leedola ezingama-60 (intsha kraca)
Ukuba & apos; nangoku ngandlela thile uphethe Ngo-2016-kukhutshwa i-9.7-intshi ye-iPad Pro , unokuthambekela ekuphuculeni iApple kunye neapos ezintsha IPad yomoya , omnye wonyaka ophelileyo & apos; s sleek Ukwahluka kwe-Pro Pro Itekhnoloji ye-ID yobuso, okanye ii-2018 & apos; s I-9.7-intshi & iiapos; eziqhelekileyo 'i-iPad . Kodwa ngenkxaso ye-iOS 12 esele inikiwe, iIOS 13 Uhlaziyo lwe-iPadOS 13 ngasekunene kwekona, kunye neprosesa ehloniphekileyo ye-A9X phantsi kwe-hood, i-Pro yakudala isenokukwenza ngokwaneleyo ukuba umsebenzi wenziwe kwiimeko ezininzi zokusetyenziswa.
Oko kuyathethwa, ukuba awunayo i-Apple Smart Keyboard eyenzelwe ngokukodwa ukuphucula imveliso kunye nokusetyenziswa kwesiseko sokuqala se-iPad Pro, namhlanje kujongeka njengexesha elifanelekileyo lokukhetha enye, njengoko i-A4C ineeyunithi ezintsha intengiso yokulinganisa nge- $ 59.99 ye pop. Oko kusenokungavakali kufikeleleke ngokulula kwizixhobo zebhodi yezitshixo ezenzelwe ukuba zisebenze kunye nethebhulethi eneminyaka emithathu ubudala, kodwa oku kukude kwimveliso yasemhlabeni, encamathele ngaphandle komthungo kwi-9.7-incher yokuhambisa idatha kunye namandla, kungoko ke kungabandakanyi mzamo Umsebenzisi kunye nenxalenye xa kuziwa ekuhlawuliseni.
Emuva ngemini, le Ikhibhodi emhlophe engwevu yayisetyenziselwa ukuxabisa i-169,99 yeedola, oko kuthetha ukuba i-apos ujonge ukugcina i-110 epheleleyo, ubuncinci kwezobuchwephesha. Ngokwendalo, iApple ayisayithengisi ngokuthe ngqo le modeli, kwaye ukufumana iiyunithi ezingasetyenziswanga kwisitokhwe kubathengisi abaphambili bomntu wesithathu akukho lula nokuba kunjalo.
Gcina ukhumbula ukuba uneeyure ezimbalwa kuphela zokutsala umrhumo ngexabiso elithotyiweyo lama-60, kwaye nangona i-A4C ingathethi ngokungqalileyo ngento edityaniswa lulo naluphi na uhlobo lwewaranti, kuya kufuneka ukwazi ukuyifumana le nto ixesha eliqhelekileyo lonyaka omnye eApple. Emva kwayo yonke loo nto, thina kunye neapos kubonakala ngathi sijongana neebhodi ezintsha, ezingafakwanga apha ezithunyelwa kwimpahla yazo yoqobo yokuthengisa.
Ngaba i-s7 edge ine-blaster
lg v10 izakufumana nini i-nougat
verizon vs & t ohlawulelwa kwangaphambili
Umda we-Samsung Galaxy S6 vs HTC One M9
I-T-Mobile ithengisa iWalmart Family Mobile kunye nababhalisi bayo abazizigidi eziyi-1.4 kwiTracfone
Ezona meko ze-bumper ze-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus
Isamsung Black Friday ijongana ne2019: Gcina kwiGPS S10, Qaphela 10, Galaxy Watch, Galaxy Fit, Smart TVs
Ukhetho lokuvula lwe-Apple Watch ngoku lusebenza nezicelo zikaSiri kwi-iOS 15